Nomad Base One Max: kalitao ambony indrindra, hery ambony indrindra | iPhone News
Nomad Base One Max: kalitao ambony indrindra, hery ambony indrindra
louis padilla | 16/05/2022 18:56 | Fitaovana IPhone, maro
Nosedraina izahay ny dock famandrihana premium indrindra azonao jerena amin'izao fotoana izao, ho an'ny fampisehoana, famolavolana ary kalitaon'ny fitaovana: Base One Max avy amin'i Nomad.
Rehefa manombatombana ny fototra fiampangana dia misy masontsivana maro tokony hodinihina: fitaovana, famolavolana, famaranana ary endri-javatra. Inona no teboka manan-danja indrindra amin'ny toby fiampangana? Zava-dehibe ny heriny, saingy miankina amin'ny zavatra tadiavintsika izany, misy fizarana hafa izay mety ho manan-danja kokoa noho ny watts amin'ny heriny. Androany izahay dia nanandrana ny toby fiantsonan'ny Base One Max vaovao avy amin'ny Nomad, izay na aiza na aiza no hijerena azy fa miavaka amin’ny lafiny rehetra.
1 Hery farany ambony
2 tsara ny roa noho ny iray
3 Miavaka, fa tsy voninahitra
Ny MagSafe dia revolisiona tao amin'ny iPhone na dia eo aza ny fahatsorany, na angamba noho izany indrindra. Ny andriamby nampidirina tao amin'ny iPhone sy ireo tranga mifanentana dia nalain'ny mpanamboatra ho fotoana hanomezana endrika vaovao sy fahafaha-manao vaovao hamoronana rafitra famandrihana mora kokoa sy azo ampiasaina. Saingy aoka tsy hohadinoina fa ny andriamby dia ampahany amin'ny MagSafe ihany, satria Ity rafitra ity dia ahafahanao mampitombo avo roa heny ny herin'ny fiampangana, izay manomboka amin'ny 7,5W amin'ny rafitra nentim-paharazana mankany 15W raha mampiasa azy isika.
Na izany aza, hatramin'izao dia vitsy ny mpanamboatra sahy nanolotra izany fanamarinana izany. "Natao ho an'ny MagSafe" izay miantoka fa tsy hoe misy fitanana magnetika ihany fa izany koa mahatratra 15W ny herin'ny fiampangana ambony indrindra. Hahita toby "MagSafe Compatible" maro ianao fa tena vitsy dia vitsy ny "Natao ho an'ny MagSafe", toa an'ity Base One avy amin'ny Nomad ity. Amin'ny voalohany dia hanana ny andriamby ianao, ary ny faharoa dia ny andriamby ary ny enta-mavesatra ambony indrindra azo atao.
tsara ny roa noho ny iray
Nomad no namoaka voalohany ny Base One, izay efa nodinihinay teto, ary ankehitriny dia sahy miaraka amin'ny Base One Max, izay miaraka amin'ny toetra tsara sy ny fomba mitovy dia mamela antsika tsy hanararaotra ny fiampangana MagSafe haingana ho an'ny iPhone, fa manolotra antsika toerana hamerenana ny Apple Watch ihany koa. Izany rehetra izany dia vita amin'ny metaly sy fitaratra miaraka amin'ny famaranana tsara izay mikarakara na dia ny antsipiriany kely indrindra aza. Noraisin'izy ireo mihitsy aza ny lanjan'ny fotony mba hahafahany mametraka ny iPhone-ntsika sy miala mora foana. Satria tena mahery ny andriamby fototra nomena lanja 900 grama izy io, mba ahafahantsika manala sy mametraka ny iPhone amin'ny tanana iray tsy misy ny Base One Max mihetsika milimetatra iray. Tsipiriany manan-danja: ny kapila fiampangana dia atsangana eo ambonin'ny tampon'ny fotony, mba hifanaraka tsara ny iPhone, na inona na inona haben'ny maodely fakantsary.
Raha voahodidin'ny fitaratra ny fitoeran'ny MagSafe, ny fijoroana metaly Apple Watch, vita amin'ny endrika anodized volondavenona matroka mitovy amin'ny an'ny sisa amin'ny fijoroana, dia rakotra plastika malefaka izay miaro ny Apple Watch amin'ny fahasimbana. Ary izany rehetra izany dia miaraka amin'ny tariby USB-C tokana izay mampifandray ao aoriana. Tsy mila manampy tariby ianao, fa mila manampy charger USB-C farafahakeliny 30W. ny hery ho an'ny fototra hiasa. Miaraka amin'ny charger ambany dia tsy hahazo fiampangana haingana kokoa ianao, fa tsy mandeha mivantana izany.
Miavaka, fa tsy voninahitra
Ity One Max Foundation ity dia miavaka. Ny iPhone dia apetraka saika irery eo an-tampon'ny kapila fiampangana noho ny andriamby mahery an'ny rafitra MagSafe, izay tsy vitan'ny hoe mahazo fampiononana ho an'ny mpampiasa izay tsy mila mandeha mitsapatsapa mandra-pahitany ny toerana mety, fa ianao koa. mamela toerana marina toy izany inona Ny fahaverezan'ny angovo amin'ny endrika hafanana dia ahena araka izay azo atao. Izany dia ahafahan'ny fiampangana mahomby kokoa, ary ny iPhone-ntsika mba hanafana kely araka izay azo atao, ary izany dia tena tsara ho an'ny fiainana bateria an'ny findainao.
Nomad, na izany aza, dia tena akaiky ny voninahitra. Ary izany no izy Tsy haingana ny charger Apple Watch, Ara-dalàna izany. Avy amin'ny Apple Watch Series 7 dia manana fiampangana haingana izahay, ao anatin'io modely io ihany ary miaraka amin'ny tariby famandrihana Apple manokana. Izany dia ahafahan'ny Apple Watch mamelona indray ny 0% ka hatramin'ny 80% ao anatin'ny 45 minitra fotsiny. Amin'izay dia hanana ny naoty ambony indrindra aho, ary raha nanampy seranan-tsambo USB-C hafa ihany koa izy ireo mba hamerenana fitaovana hafa amin'ny tariby, dia mety ho ny mofomamy amin'ny mofomamy.
Ny Base One Max vaovao an'i Nomad no toby famandrihana ambony indrindra azonao vidiana amin'izao fotoana izao. Taona maivana lavitra an'i Apple's MagSafe Duo, dia manolotra antsika ny 15W haingana fiampangana ho "Natao ho an'ny MagSafe" fa miaraka amin'ny endrika sy ny fitaovana izay mahatonga ny Apple ho toy ny kilalao. Ary ny vidiny dia saika mitovy. Azonao atao ny mividy ity Base One Max ity amin'ny tranokala Nomad amin'ny $149.95 (rohy) na fotsy na mainty. Antenaina fa tsy ho ela dia ho hita any amin'ny magazay hafa toa an'i Macnificos sy Amazon izany.
Navoaka tamin'ny: May 16 amin'ny 2022
Fanovana farany: May 16 amin'ny 2022
Famolavolana sy fitaovana miavaka
100% mifanaraka amin'ny MagSafe 15W
900 grama ny lanjany
Apple Watch Charger mahazatra
Tsy mampiditra adaptatera herinaratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Nomad Base One Max: kalitao ambony indrindra, hery ambony indrindra
Vaovao farany! iOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 ary tvOS 15.5 vonona ho sintonina
Gurman dia maminavina fandraisana anjara bebe kokoa sy fampiharana vaovao amin'ny iOS 16